Ubuso nomzimba zidinga ukunakekelwa nsuku zonke - yilowo nalowo wesifazane uyazi ngakho. Abanikazi ezomile isikhumba hlobo ngokuvamile kufanele asebenzise izindlela ezahlukene okuyinto ungayeki umphumela kuyavumelana. Kulesi sihloko uzofunda konke mayelana amafutha okuthambisa "Belobaza" kanye nezici zayo.
Leli thuluzi esiyingqayizivele lakhiwe operation ahlangene cosmetologists Russian dermatologists inkampani Belupo. Cream "Belobaza" yenzelwe ngqo isikhumba esomile futhi omile kakhulu futhi owamisa yonke imithetho ukuphepha kanye hypoallergenic. Ngaphezu kwalokho, e ngezithako zawo ayiqukethe ngamakha zamakhemikhali, flavorings kanye colorings, okuyinto kakhulu ukuba khona lapho ekhetha umnakekeli izindlela zesimanje isikhumba.
Amafutha okhilimu bayakwazi ukuhlola umphumela izinkulungwane zabesifazane eRussia kanye CIS amazwe. Phela, yakhelwe isikhumba wacasuka athobe, okunomsoco kuphephile ngaphakathi nokudala isendlalelo Ukuvikelwa. Ngakho umphumela amafutha uyakwazi ligcinwe amahora angu-24.
Ngokusho dermatologists, leli thuluzi ezintsha kungenziwa ngokuphepha sisetshenziswa eziningi izifo zesikhumba ukuthi babe uhlamvu ukuvuvukala. Kulokhu, umphumela wawo ubonakala kunalokho ngokushesha, evumela isikhathi esifushane ukuqeda izinkinga.
I izakhiwo eyinhloko ukhilimu "Belobaza"
Ukuqedwa ukoma ngokweqile, enomuzwa ka yobunzima flaking, lo ukuzinza yamanzi ibhalansi kwesikhumba - konke lokhu nokunye ukwazi okuningi ukunikeza izindlela "Belobaza". Cream, ukulaya kucacile futhi kulula ukusetshenziswa nsuku zonke, kuyasiza ukuxazulula eziningi izinkinga ngesikhumba ngokusebezisa njalo.
izingxenye zalo ukwandisa kuyaqina kwesikhumba, ukugcwalisa kanye lipids kunesidingo. Ngakho kukhona amafutha esebenzayo hhayi kuphela, kodwa ephakamisa umphumela. Njengoba yaziwa, isikhumba esomile uchayeke kakhulu ekwakhekeni imibimbi ekuseni, kanye nobudala.
Njengoba kuphawuliwe ngaphambili, ngaphezu umphumela yezimonyo, ukhilimu "Belobaza" olwisana ezinye izifo dermatological. Kuvame engabelwe eczema kanye izilonda ahlukahlukene isikhumba njengento esizayo therapy jikelele. Ngaphezu kwalokho, ingasetshenziswa uma yisishiso nomzimba.
Ukwakheka eyingqayizivele ukhilimu lakhiwe ikhumbula izici ezomile futhi ebucayi izinhlobo zesikhumba.
Ngakho, ukwatapheya akhiphe kuhloswe amafutha asebenzayo nqgo zokukhiqiza kuyi-collagen. Le ngxenye Sekuyisikhathi eside esetshenziswa ukuzimonyonga ezimisiwe ngokwabo phakathi abathengi.
Vitamin B 5, okuyinto yaziwa nangokuthi panthenol, uyakwazi ukuba aphulukise microcracks futhi sivikeleke elangeni elikhanyayo.
Glycerin ngcono izakhiwo yezingxenye kusho "Belobaza". Cream Izibuyekezo eyabonakala ekulenzeni libe namandla, ingenye imithi eminye esebenza ngempumelelo kakhulu futhi kungase kutholakale for ekwelapheni izifo zesikhumba ngempela.
Q 10 -koenzim kanye ulwelwe akhiphe kwakhiwa imibimbi bushelelezi futhi wenze isikhumba nokunwebeka ngaphezulu, okwandisa ithoni yayo. Ngaphezu kwalokho, lezi zingxenye benza izenzo ezibonisa Akhipha ubuthi kuthuthukisa ibala.
Kukhona ezinye izingxenye kwamakhemikhali Ukwakheka kusho "Belobaza". Ukhilimu, okuyinto libuyekeza ukufakazela nomphumela walo omuhle esikhumbeni, iqukethe propylene glycol, okuyinto uba uyalondoloza. A uwoyela inqubo, udala zokuzivikela amanzi-oxosha ifilimu Yenziwe imikhiqizo kaphethiloli.
Cream "Belobaza": yokusetshenziswa
Sebenzisa ukhilimu ngezinhloso abakhathalelayo nokwelapha ulula. Ngenxa yalesi ngokwanele ukuba ukusula isikhumba futhi sisebenzise ungqimba elincanyana kusho "Belobaza". Cream, imfundo echaza ukusetshenziswa kwayo yonke le nqubo, kudinga ukusatshalaliswa umfaniswano massage. Lokhu kuzovumela izingxenye ekhona ngangokunokwenzeka ukuba zingene shí isikhumba. Ngakho kubalulekile ukuba ulandele izinguquko isikhumba ngesikhathi ukusetshenziswa futhi ulawule inani lemali.
Ukuvumelana ukhilimu ilula ngokwanele, ngakho-ke ngokushesha wakwamukela futhi engashiyi ezisalayo izingubo. Ngaphezu kwalokho, akukho umuzwa ukungakhululeki ngenxa ekumiseni ifilimu oily. Yingakho abesifazane ukukusebenzisa njengoba base ngaphansi ukwakheka nsuku zonke. Kulokhu, isikhumba uyobheka hydrated usuku lonke.
Inani elikhulu labantu kakade esikalini njengendlela yokuthola "Belobaza". Cream, analogue zazo ayikaziwa eRussia, has nhlobo Izimo. Phela, ngokuvumelana bhukwana, ingasetshenziswa hhayi kuphela komzimba, kodwa futhi abesifazane abakhulelwe ibele. It is uvunyelwe ukusebenzisa ukhilimu kunoma iyiphi indawo isikhumba, okuyinto uthambekela ukoma noma ukuvuvukala asebenzayo.
Nokho, uma ungabaza ikhethelo ukuphepha, ukwenza isivivinyo endaweni encane zomzimba. Kuyoba nakanjani uqiniseke ukuthi hypoallergenic futhi efanelekayo ngisho isikhumba elikhanyayo kakhulu futhi ebucayi.
Kuze kube manje, cishe zonke ekhemisi ezinkulu eRussia kanye CIS amazwe ungakwazi ukuthenga dermatological "Belobaza". Cream, ogama Ukwakheka uhlukile, abiza ruble 450 e-40 ml tube. Yiqiniso, izindleko ezifana akakwazi ngokuthi yeningi. Kodwa ingabe ngempela ke lokho umphumela lapho ingatholakala ngemva kokusebenzisa indlu ukhilimu.
Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa kungenziwa yayala ezitolo eziningi online ezinikeza kwamahhala ekhaya lakho. Ngaphambi kokufaka i-oda yakho qiniseka ukuqhathanisa amanani bese ukhetha okukhethwa kukho enenzuzo kakhulu.
Umthengi nokubuyekezwa ukhilimu "Belobaza"
Lutho elikushoyo izinga umkhiqizo kwafana ukubuyekezwa amakhasimende ngempela. Kuyefana nasendleleni izindlela "Belobaza". Cream, isiqondiso nokuyinto ezwakalayo kunoma ubani, ngempela buyindlela ephumelelayo for isikhumba esomile kanye eyomile kakhulu. Amalungu saphawula ukuthi leli gama ubhekana kahle ububomvu kanye kunomphumela amafutha.
Nokho, ungakwazi ukuhlangabezana nokubuyekeza ezimbi. Njengomthetho, zikuthinta esebenzisa kwengoma. Ngokwesibonelo, abanye abathengi iyashaqisa izingxenye imikhiqizo elicwengisiswe petroleum, okuyinto equkethwe ukhilimu "Belobaza". Kodwa, njengoba kuboniswa izifundo eziningi laboratory, uwoyela lobuchwepheshe iphephile ukuyisebenzisa. Ikakhulukazi umthamo ngendlela ukhilimu lincane kakhulu.
Kuphephile ukusho ukuthi omunye impumelelo yakamuva Awezesikhumba - kusho "Belobaza". Cream, isiqondiso lapho olusetshenzisiwe lulula futhi lucacile, umise ngokwaso njengoba ikhwalithi yomkhiqizo ephephile ezingaba e esikhathini esifishane ukuxazulula izinkinga ezihlobene ukoma futhi ukuvuvukala isikhumba.
Zonke flavour of France: "Chanel Amathuba yamathenda"
A zakudala Italian ukunambitheka Ttrussardi "UDonna"
Gucci "Umona Me": ihlobo selifikile!
"Givenchy", Mascara: ukubuyekezwa. makeup Givenchy
Ukunambitheka Soft futhi eyingqayizivele "Bleu de Chanel"
Indlela ukudweba unogwaja, usebenzisa ipensela
Kukhona izimvilophu imali for umshado ngezandla zakhe e isitayela Provence: isigaba master, isithombe
Yiziphi, inhlanzi wesilisa? isici uphawu
Indlela ukhule pepper e ekhanyayo kahle?
Ukuphi Giardia e abadala?